Izindaba Umake "Ulwazi nolwazi" - ULLER
Zonke izigaba Izindaba Ezemidlalo Nokuzijabulisa Ukuzijabulisa Abantu Ulwazi noLwazi Ezempilo Nokuqeqeshwa Amathrendi Ukuvakasha nezindawo
Wonke umdlali onekhono kufanele afake izibuko zezemidlalo ezintweni zabo eziyisisekelo, ngoba ziyinto esemqoka yokuvikela amehlo ekushayweni noma emisebeni yelanga. Kepha izibuko zelanga zezemidlalo, ngokwazo, zingaphezulu kakhulu kwalokho, imfashini, ukuvikelwa nokusebenza okuphezulu. Funda futhi uthole izinzuzo zokugqoka izibuko zelanga zemidlalo!
IWindsurfing ngumdlalo ogcwele izimfihlo kanye nokufuna ukwazi ongathanda ukukuthola. Okulandelayo, sizokutshela ngokhokho balo mkhuba, ngamabala ongaphuthelwa wona uma uthanda iWindsurfing ... Nokunye okuningi!
Izibuko zokuhamba ngebhayisikili Lungela ukuhamba ngebhayisikili entabeni!
Uma ucabanga ukuthenga izingilazi zokuhamba ngebhayisikili zendlela yakho elandelayo emgwaqeni noma ezintabeni, sizokutshela ukuthi yiziphi izici okufanele uzicabangele ngaphambi kokufaka umkhiqizo enqoleni yokuthenga, nokuthi kungani amalensi ashintshanayo e-Uller® eyi inketho ekhangayo.
Sixazulule imibuzo ebuzwa njalo mayelana nezingilazi ezi-polarized!
Kusuka ku-Uller® sifuna ukukuchazela ukuthi kusho ukuthini ngempela ukuthi izibuko zethu zelanga zihlukanisiwe futhi sichaza nokuthi yiziphi izinzuzo lolu hlobo lwezibuko zelanga ezigqamile ezinalo nokuthi kungani kufanele uzikhethe ngokuya ngezici zazo. Ungahlali nokungabaza, lapha siphendula imibuzo ebuzwa njalo mayelana nezibuko zelanga ezihlukanisiwe!
Ama-mask ski Photochromic Abalulekile ezinsukwini zakho zeqhwa!
Kusuka ku-Uller® sifuna ukukufundisa ngokubaluleka kwamamaski okushushuluza anamalensi we-photochromic uma kuziwa ekuvikeleni ukubona kwakho lapho uzijwayeza ukushibilika eqhweni, ukushibilika eqhweni, ukuzimela noma yimuphi umdlalo wezemidlalo ongaphandle. Thola izinzuzo zezikebhe zokushushuluza ezinamalensi we-photochromic!
Izeluleko zokuvikela eziyisisekelo ezintabeni | I-infographics
Januwari 27, 2021
Kusuka ku-Uller® Sizilungiselele lezi zeluleko zokuvimbela noma iyiphi ingozi ezintabeni ngoba sifuna abagibeli bethu nabasubathi abangochwepheshe ukuthi baqhubeke nokujabulela imisebenzi abayithandayo ngenkathi bevimbela noma yiluphi uhlobo lwengozi. Landela imiyalo yethu futhi uzilungiselele ngokuphelele i-adventure yakho ezintabeni!
Ukushushuluza eqhweni noma eqhweni akuwona umdlalo. Le yimidlalo eyeqisayo edinga ukulungiswa nemibandela efanelekile. Into ebaluleke kunazo zonke yilokho faka ikhwalithi engcono kakhulu kwimishini oyiphethe kufaka phakathi eminye izibuko kazibuthe.
I ski isizini 2020/2021 isizoqala! Izindawo zokubhuka ze-ski bezisungula inqubo ethile amasonto ukuze zikwazi ukuvula ngokuphepha ... kanye ne- your izibuko zeqhwa zizoba yinto ebalulekile ukunciphisa ubungozi bokutheleleka kulo nyaka.
Uma usacabanga ngokuqala emidlalweni yasebusika, akukaze kwephuze kakhulu ukubuyekeza okuncamelayo lapho ukhetha ukuthi uzoqala kuphi, khetha ukuthi imiphi imikhuba ekufanele kakhulu futhi uqonde ukuthi kufanele uthenge kuqala yini Izibuko zeSki noma eyakho izibuko zeqhwa.Thola okuthe xaxa mayelana nayo yomibili imidlalo lapha!
El i-freeride is the modality of ukushibilika eqhweni lapho wenza khona ukwehla okuphelele kwe-piste, eqhweni eliyintombi, okuhle izibuko zeqhwa, sigwema wonke amadwala nezithiyo ezizayo. Njengamanje kunezivivinyo ze-freeride snowboarding nemincintiswano emizileni edwetshiwe.
Ukugqoka izimaski ezinhle zokushushuluza kubalulekile lapho uzijwayeza imidlalo eyingozi eqhweni. Ngabe ubona sengathi ukulungele ukunqoba ubungozi bemvelo lapho ushibilika eqhweni? Thola izikhathi ezi-5 ezibaluleke kakhulu lapho ngokungangabazeki uzokwazisa ukuhamba nawe okuhle kakhulu izibuko zeqhwa!
Thwala ukushushuluza izibuko kubalulekile lapho sijwayeza lo mdlalo nganoma yiluphi uhlobo lwawo.Uvele usuyazi ukuthi ayini? Las izindlela zokushushuluza eqhweni? Qhubeka ufunde ukuze uthole izindlela ezinhle kakhulu ongashushuluza ngazo futhi uthole ukuthi kungani kufanele usebenzise okuhle njalo ukushushuluza izibuko ukuvikela!